दश वर्ष अगाडि लुकाइएको १० लाख डलरको खजाना कसरी पर्यो फेला ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
दश वर्ष अगाडि लुकाइएको १० लाख डलरको खजाना कसरी पर्यो फेला ?
प्रकाशित मिति : २०७७, २७ जेष्ठ मंगलवार १८:४५
उत्तरी अमेरिकाको रकी माउन्टेन्समा लुकाइएको १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको सुन, मणिमाणिक्य र बहुमूल्य वस्तु सहितको खजाना फेला परेको छ । प्राचीन वस्तुहरू सङ्कलन गर्ने फरेस्ट फेनले एक दशकभन्दा अगाडि सो पीतलले बनेको कन्तुर लुकाएर भेट्टाउन सक्नेका लागि छाडिदिएका थिए ।
उनको आह्वानपश्चात् हजारौँ मानिसहरूले सो कन्तुर खोजेको, केहीले जागिर नै छोडेर बचत पैसा खर्च गरि गरि खोजीमा लागेको र चार जनाले खोजको क्रममा ज्यान समेत गुमाएका थिए । अहिले फेनले पूर्वका एक व्यक्तिले सो खजाना भेटेको बताएका छन् । ‘त्यो रकी माउन्टेन्सको जङ्गली क्षेत्रमा ताराहरूमुनि रहेको थियो र मैले १० वर्षभन्दा अगाडि लुकाएको स्थानबाट नहटेको अवस्थामा थियो,’ अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोका ८९ वर्षीय अर्बपति फेनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
उनले आफूलाई खजाना पत्ता लगाउने मानिसको परिचय थाहा नभएको तर उसले सन् २०१० मा प्रकाशित आफ्नो आत्मकथामा रहेको २४ हरफको कविताको आधारमा खजाना रहेको स्थान ठ्याक्कै पत्ता लगाएको बताएका छन् । फेनले स्थानीय पत्रिका सान्ता फे न्यू मेक्सिकानलाई सो व्यक्तिले आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न नचाहेको तर तस्बिर पठाएर खजाना फेला पारेको पुष्टि गरेको बताए । फेनले नौ किलोको कन्तुरमा दुर्लभ सुनका सिक्का, पुरातन् गरगहना र ऐतिहासिक सुनौला ऐनाजस्ता वस्तुहरू राखेको बताएका छन् ।
स्लोभाकियामा उड्ने कारको ३५ मिनेटको उडान परीक्षण सफल
हवाई कारको एउटा मोडेल स्लोभाकियाका दुई विमानस्थलबीच ३५ मिनेटको परीक्षण उडानमा सफल भएको